မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး(Li Junhua)ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှာ ကျင်းပစဉ်
အခုတလောမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အရေးအခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတဲ့အတွက် တရုတ်သံရုံးက အခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပေးတာလို့ တရုတ်သံအမတ်က ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူနေတဲ့ လက်ပန်းတာင်းတောင်အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်သံအမတ်က ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်စီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်းတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေ လျော်ကြေးကိစ္စတွေ အကျိုးအမြတ်ကိစ္စတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှ ချုပ်ဆိုထားတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဟာ လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမဟုတ်ကြောင်းလည်း သံအမတ်က ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Burmese government officer sold the project took money. Burmese people want investor to stop the project. It's very un-logic.
Dec 14, 2012 06:28 PM
Burmese people want fairness and justice. We do not want to be cheated by selfish and cunning investors
တရုတ်တွေ မြန်မာပြည်တွင်မက နေရာတိုင်း/နိုင်ငံ တိုင်း မှာ ၀င်ပြီး ၀င်ပြီးဂုတ်သွေးစုတ်နေတယ် ချယ်လှယ်ချင်နေတာကို ကမ္ဘာ ကသိနေပါပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့ တို့ပြည် တို့ မြေက အမြန်ထွက်သွားကြပါ မဟုတ်ရင် အင်ဒိုနီးရှား မှာ ၈၄ တုံး က အဖြစ်ထက် ပိုပြီး ဆိုးသွားမယ်
Dec 10, 2012 07:41 PM
Min Htet Ther
Dec 07, 2012 09:53 PM